Global Voices teny Malagasy » Ny Fijerin’Ireo Mpila Ravinahitra Ao Frantsa ny Firenena Mialoha ny Fifidianana Ho Filoham-pirenena · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Marsa 2017 5:04 GMT 1	 · Mpanoratra Rakotomalala Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Eoropa Andrefana, Frantsa, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fifidianana, Fifindràmonina, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka
Pikantsary avy amin'ny sarimihetsika “une année en Provence – Russell Crowe sy Marion Cotillard
Araka ny INSEE, tokony ho eo amin'ny 8,8%-n'ny mponina any Frantsa na 5,8 tapitrisa eo tamin'ny taona 2013 ny salanisan'ireo olona mpila ravinahitra. Tamin'io taona io ihany, tombanana ho eo amin'ny 3,5 tapitrisa  eo ireo frantsay monina any ivelany. Nahitana fihenana betsaka  hatramin'ny taona 2006 noho izany ny elanelana misy eo amin'ireo olona mpifindramonina miditra sy mivoaka any Frantsa. Na dia nampihena ny fifindra monina manerantany aza ny fivoaran'ny fisintahana (Brexit, ny fifidianana Amerikana ..) dia mbola maneho ampahany manan-danja amin'ny isan'ny mponina any amin'ny firenena tandrefana ihany ireo vondrom-piarahamonina mpila ravinahitra .
Ny mpifindra monina miditra sy mivoaka ao Frantsa nahitana fihenana teo anelanelan'ny taona 2006 sy 2013 tao amin'ny Le Monde / INSEE – Sehatra ho an'ny daholobe
Mijery am-pahamailoana ny fiakaran'ny foto-kevitra nasionalista any Frantsa ireo mponina ireo izay ahitana an'i Marine Le Pen misongadina voalohany amin'ny fitsapan-kevitra volana vitsivitsy alohan'ny fifidianana ho filoham-pirenena. Manamafy ny faharesen-dahatry ny antoko farany havanana Frantsay  fa akaiky ny fotoana hakany ny fahefana ireo fandresen'i Donald Trump tamin'ny fifidianana Amerikana sy ireo mpanohana ny Brexit any amin'ny Fanjakana Britanika .
Midika inona ho an'ireo mpila ravinahitra ny fandresen'ny farany havanana? Nanazava tamin'ny alàlan'ny mailaka i Carine, injeniera Kameroney mipetraka any Paris:
Tsy maintsy mankany amin'ny prefektiora aho afaka tapa-bolana mba haka ny karatra fahazoan-dàlana honina maharitra. Manantena aho fa ho azo alohan'ny fifidianana ilay izy, satria mety hiova ao anatin'ny fotoana fohy ny fitsipika eto. Fantatro fa maro ihany koa ireo namana no miandry ny fanavaozana ny karany ary tena manahy momba ny hoaviny ao anatin'ny fotoana fohy.
Manahy mikasika ny fahasarotana fanampiny momba ny fijanonana ara-dalàna ihany koa ilay mpianatra Danoà Iben eo amin'ny fikarakarana ny antontan-taratasy sady efa mihevitra rahateo izy fa efa somary hentitra  ny dingana :
Rehefa tonga tao Paris aho, tsy mbola nahay ny fomba fitantanan-draharahan'ny Frantsay ny tenako. Nihevitra hatrany aho fa mahomby sy mangarahara noho ny any amin'ny faritra avaratr'i Eoropa izany. Raha fantatro mialoha fa tsy izany ny zava-misy dia afaka nisoroka adin-tsaina maro aho .
Zarain'ny ankamaroan'ireo mpila ravinahitra ity fanahiana mikasika ny olan'ny antontan-taratasy ity. Mampiseho ny fanadihadiana  nataon'ny Paris21.tv fa ny fifandraisana amin'ny fitantanan-draharaha (Fiahiana ara-tsosialy, ny finday sy ny hetra) no tena fanahiana lehibe ho an'ity vondrom-piarahamonina ity (jereo ny sary etsy ambany)
Fanadihadihana mikasika ireo mpila ravinahitra monina ao Frantsa tamin'ny alàlan'ny Les echos 2 sy Paris21Tv
Fa iza tokoa moa ireo mpila ravinahitra izay monina ao Frantsa amin'izao fotoana izao?
Tsy mahagaga, araka ny tatitra avy amin'ny Minisiteran'ny Atitany  tamin'ny taona 2012, ao Paris sy any Seine-Saint-Denis no betsaka mpila ravinahitra indrindra : miaina ao an-drenivohitra ny 307.000 amin'ireo mpila ravinahitra maherin'ny 5 tapitrisa ary any amin'ny departemantan'ny Île-de-France ny 279 000. Mbola mahavariana kokoa, ao anatin'ireo mpifindra monina miisa 230.000 tamin'ny taona 2012, 46% no avy any Eoropa , ny 30% avy any Afrika, 14% avy any Azia ary 10% avy any Amerika sy Oseania. Lahatahiry manohitra ny hevitry ny mpandala ny mahazatra elatra havanana any Frantsa ireo.
Fifindra-monina vao haingana tao Frantsa isaky ny kaontinanta tamin'ny alàlan'ny INSEE – Sehatra ho an'ny daholobe
Inona no fahatsapan'ireo vondrom-piarahamonina ireo momba ny fiainana any Frantsa amin'izao fotoana izao?
Miezaka ny hamaly io fanontaniana io ny fanadihadiana nataon'ny Paris21.tv  . Hita noho izany fa afa-po amin'ny asa ataony ny telo ampahefatra amin'izy ireo kanefa nitaraina fa tsy mba “sariaka ny olona” ao an-toerana. Noho izany, mahita ireo frantsay ho “mpirehareha, tsy mba sariaka ary tsy malala-tanana” ny valo amin'ny mpila ravinahitra folo. Mampionon-tena amin'ny sakafo sy ny kolontsaina izy ireo mba handresena ireo fifandraisan'ny olona ireo izay hitany fa “mahantra “.
Nanazava ny fomba fijeriny  i Samantha Brick, mpanoratra Anglisy mipetraka ao Lot ao Midi-Pyrénées:
Ny tsy nahafantarako mialoha fa sarotra ny mahazo namana ao Frantsa no fanenenako lehibe indrindra . Efa dimy taona mahery izao no nipetrahako teto Frantsa , ary mbola tsy manana aho na dia iray aza. Ianareo, vehivavy mpila ravinahitra, alohan'ny handehananareo aty Frantsa, anontanio tsara aloha raha maro ireo vehivavy mpila ravinahitra ao amin'ny faritra. Raha tsy izany, vetivety dia ho manirery sy hitoka-monina ianareo.
Milaza zavatra tsara kokoa ireo mpila ravinahitra sasany, manazava ny antony mampanintona  ny fiainana ao Frantsa i Bill :
Vetivety dia ho zatra amin'ny andro tsy hiasana handraisa-karama ianao eto, ny 35 ora isan-kerinandro, ny fepetran'ny asa sy ny kalitaon'ny fiainana izay mahatonga ny tsy fahafoizana handeha any an-toeran-kafa
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/03/15/96466/
 5,8 tapitrisa : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281393
 3,5 tapitrisa: http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/10/13/l-insee-bouscule-les-idees-recues-sur-l-immigration_4788773_3224.html
 Nahitana fihenana betsaka: http://www.insee.fr/fr/ffc/iana/ia22/IA22.pdf
 Manamafy ny faharesen-dahatry ny antoko farany havanana Frantsay: http://www.slate.fr/story/139298/stephen-bannon-marine-le-pen-aiment-roman-immigration
 somary hentitra: http://www.thelocal.fr/galleries/lifestyle/expat-regrets-france-top-ten/11
 tatitra avy amin'ny Minisiteran'ny Atitany: http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/69076/503575/file/32574_rapport-etrangers-en-France.pdf
 46% no avy any Eoropa: https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/1281393/ip1524.pdf
 fanadihadiana nataon'ny Paris21.tv: https://www.lesechos.fr/01/10/2014/lesechos.fr/0203821978447_expatries-en-france---voici-comment-ils-nous-voient.htm#
 ny fomba fijeriny: http://www.thelocal.fr/galleries/lifestyle/expat-regrets-france-top-ten
 manazava ny antony mampanintona: http://www.thelocal.fr/galleries/lifestyle/expat-regrets-france-top-ten/8